မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် Khon Kaen University တို့ ပူးပေါင်း၍ “Strategic Planning and Project Management Training” သင်တန်းတစ်ရပ်ကို ပထမဆုံးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ - MHAA | Myanmar Health Assistant Association
ရန်ကုန် (နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် Khon Kaen University တို့ ပူးပေါင်း၍ “Strategic Planning and Project Management Training” သင်တန်းတစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ City Golf Hotel ၌ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်မှ (၂၇) ရက်အထိ (၇) ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှု အခန်းကဏ္ဍအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရည်အချင်းများကို သိရှိစေရန်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းရှုထောင့်များအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိစေရန်၊ စီမံချက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စေရန်၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့် စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအား ရှင်းလင်းစွာ သိရှိစေရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ၎င်းသင်တန်းအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းပြုလုပ်ရခြင်းမှာ ကျန်းမာရေးမှူးလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ထိရောက်အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း၏ စီမံချက်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသော ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေး တိုးတက်မြှင့်မားလာစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် Khon Kaen University တို့ ပူးပေါင်းပြီး ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းများ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းများဖြစ်မြှောက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြသွင်မှ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
သင်တန်းတွင် သင်တန်းဆရာများအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံ Khon Kaen တက္ကသိုလ်မှ Assoc. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong (Dean of Public Health, Khon Kaen University) ၊ ပါမောက္ခချုပ် (ငြိမ်း) Prof. Dr. စန်းစန်းမြင့်အောင် (မကွေး-အခြေခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်) ၊ ဒေါက်တာညွှန့်နိုင်သိန်း (မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်)) ၊ ဒေါက်တာ အောင်ကေတု (မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်) တို့မှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအလိုက် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ကြပြီး သင်တန်းသားများအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) ရုံး နှင့် စီမံချက်ရုံးများမှ ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း (၃၀) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်မ ယခုလို လာရောက် သင်ကြားပို့ချခွင့် ရတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် သင်တန်းသားများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီက သင်တန်းသားတွေအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆရာတို့ အားလုံးဟာ အသက်အားဖြင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာတို့အားလုံးဟာ ဒီအရွယ်မှာ အခုလိုမျိုး ကျန်းမာရေးစီမံချက်တွေကို ခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်နေကြတာဟာ ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်။” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ Khon Kaen တက္ကသိုလ်မှ Assoc. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong က သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“General Management ၊ How to report and interpret ၊ Management Principle” စသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ပါမောက္ခချုပ် (ငြိမ်း) Prof. Dr. စန်းစန်းမြင့်အောင်မှ လည်းကောင်း၊ “What is Strategy? ၊ Vision, Mission and Objective Formulation and Analysis ၊ SWOT and TOWS assessment ၊ Strategy Development and Log Frame” စသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဒေါက်တာညွှန့်နိုင်သိန်းမှ လည်းကောင်း၊ “Donor relationship and Risk mitigation plan ၊ Different types of grants Management and Compliance” စသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဒေါက်တာ အောင်ကေတုမှ လည်းကောင်း ၊ “Introduction and What is Applied Project Management? ၊ Skills and Principles of Applied Project Management ၊ Understanding Project Cycle in detail ၊ Components of Project Cycle Management” စသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ Khon Kaen တက္ကသိုလ်မှ Assoc. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong မှ လည်းကောင်း အသီးသီးသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ကြသည်။
“ဒီသင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိလုက်နေတဲ့စီမံချက်တွေမှာ ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲ၊ ဘာတွေ ထပ်လုပ်ရမလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေထပ်လေ့လာရအုံးမလဲ ဒါမျိုးတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်။ ဒါတွေအတွက် အချိန်ပေးပြီး ယခုလို့ လာရောက်သင်ကြားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆရာတွေ ဆရာမတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် Head of Program ကို ဆန်းလင်းဦးက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် Khon Kaen University တို့၏ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (Letter of Affiliation) ကို နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Hotel Yangon တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြသွင်နှင့် Khon Kaen University မှ Assoc. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် Khon Kaen University တို့ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းသုံး နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်များမျှဝေရေး၊ သင်တန်းများပူးတွဲဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနှင့် အလုပ်သင်ဝန်ထမ်းများ အပြန်အလှန်စေလွှတ်နိုင်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (Letter of Affiliation) ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာ သာထွန်းကျော်၏ ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု City Golf Hotel တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် “Strategic Planning and Project Management Training” သင်တန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် Khon Kaen University တို့ ပူးပေါင်း၍ ပထဆုံးပြုလုပ်သည့် သင်တန်းဖြစ်သည်။